Ny momba ny osmosis rehetra: ny fomba fiasa, ny tombony ary bebe kokoa! | Nutri Diet
Mety efa naheno momba osmosis mihodina ianao, nanomboka tamin'izay misy olona maro eran'izao tontolo izao manapa-kevitra ny hametraka singa ao an-tranony.
Ny antony lehibe mahatonga izany dia satria izy ireo miahiahy momba ny kalitaon'ny rano fantson'izy ireo na te hanatsara ny tsirony fotsiny.
4 Ahoana ny fananana rafitra osmosis mihodina an-trano
5.1 Solony hafa hamerenana ny osmosis
Izy io dia iray amin'ireo fomba filtration rano feno sy mahomby indrindra. Momba ny a fitsaboana simika ampiasaina hanadiovana rano avy amin'ny paompy. Ny vokany dia tsiro tsara kokoa sy karazan-drano mahasalama kokoa hosotroina sy mahandro ho an'ny olona manana aretina sasany.
Raha tsorina, averina ny fitaovana osmosis manivana amin'ny alàlan'ny fonosana manokana. Mampiasa tsindry sasany, navelan'izy ireo saika ny zava-drehetra niaraka tamin'ny rano fisotro: fandotoana ivelany, akora matevina, molekiola lehibe ary mineraly.
Ny ampahany voadio dia vonona hosotroina, fa ny ampahany kosa avadika ho rano maloto. Izany hoe, ariana. Midika izany fa osmosis mihodina mandany rano be.
Ny rafitra filtration osmosis mifanohitra dia afaka manala ny firaka. Ny firaka be loatra amin'ny vatana dia mety hitarika tosidra ambony, tsy fiterahana ary olana ara-pahasalamana hafa. Dia izay mahasoa ny olona manana olana ara-pahasalamana sasany, toy ny olona manana hery fiarovan'ny tena malemy na mila mihinana sakafo sodium ambany.
Tsara ihany koa ny manamarika izany Ny rano osmosis avadika dia tsy misy Cryptosporidium. Raha vao voatelina, ity katsentsitra avy amin'ny rano voaloto ity dia miteraka tazo sy fivalanana. Mampidi-doza indrindra izany ho an'ny ankizy, izay mety hiteraka tsy fahampian-drano sy tsy fanjarian-tsakafo.
Ny osmosis mivadika dia manome tsiro kokoa ny rano amin'ny paompy ary manampy amin'ny fampihenana ny fampiasana plastika. Ho solon'ny rano anaty tavoahangy, afaka mamonjy vola ihany koa izy. Na izany aza, miankina amin'ny vidin'ny fitaovana, ny ampahany ary ny fanovana.
Ahoana ny fananana rafitra osmosis mihodina an-trano
Ny rafi-osmosis miverimberina ao an-trano dia matetika apetraka ao an-dakozia, indrindra eo ambanin'ny filentehana. Araka izany, ny dingana lehibe indrindra alohan'ny fametrahana dia zahao raha misy toerana ampy ho an'ny iray amin'ireo solosaina ireo ao amin'io faritra an-dakozia io.
Raha vantany vao azonao antoka fa manana toerana hametrahana azy ianao dia tsy maintsy manapa-kevitra amin'ny endrika sy maodely. Manolotra safidy maro hifanaraka amin'ny teti-bola rehetra ny tsena ankehitriny. Ny vidiny dia manomboka amin'ny 100 ka hatramin'ny an'arivony euro arakaraka ny haitao sy ny fitaovana anaovana azy. Na izany aza, tsy maintsy ampidirintsika ny vidin'ny fametrahana, ny fanitsiana, ny faritra fanampiny isan-taona ary ny mety ho fatiantoka.
Misy hevitra maro samy hafa momba ny hoe mahasalama kokoa noho ny rano amin'ny paompy raha olona salama no resahina. Misy milaza fa mahasalama kokoa io, fa ny sasany kosa mahita azy tsy tsara na ratsy noho ny rano famaohana mahazatra. Anisan'ireo manelingelina azy, misy koa ireo izay mihevitra azy ho mampidi-doza satria manova ny fari-drano ao anaty io rafitra io.
Ary koa, ireo singa osmosis miverimberina dia voampanga ho nandany rano be loatra. Ary ny marina dia izay misarika betsaka kokoa noho izay vokariny. Betsaka ny olona no manilika azy noho izany.
Ankoatra izany, mila fikojakojana ireo singa ireo. Raha tsy izany dia miangona ao anaty sivana ny loto ary mety hiteraka fahasimban'ny kalitaon'ny rano, izay mifanohitra amin'izay tadiavina ihany rehefa misafidy rafi-pitantanana rano ho an'ny trano. Ary izany, ara-dalàna, dia mitaky fandaniana vola isan-taona.
Ny fiheverana ny mahatsara sy ny maharatsy azy, ary koa ny mampiavaka ny trano tsirairay, Anjaranao tsirairay no manapa-kevitra raha hisafidy ny fametrahana rafitra osmosis mihodina. Na ny mifanohitra amin'izay dia tohizo ny fampiasana rano fisotro na tavoahangy, na fitambaran'izy roa.
Solony hafa hamerenana ny osmosis
Raha tsy olana ao an-tranonao ny kalitaon'ny ranoRaha mihevitra ny hametraka rafi-osmosis miverimberina fotsiny ianao hanatsarana ny tsiro, dia tsara ny mihevitra ireo safidy hafa mora vidy kokoa, toy ny jugs manadio.
Marihina fa misy fomba mahomby amin'ny fomba mitovy amin'ny osmosis miverimberina, ary amin'ny fomba mora sy mora kokoa. Ireto tetika manaraka ireto dia afaka manampy anao hamaha olana sasany mifandraika amin'ny rano fisotro:
Manala firaka Rehefa manokatra ny paompy voalohany ianao amin'ny ora vitsivitsy dia tsara ny mamela ny rano mangatsiaka hihazakazaka mandritra ny minitra maromaro alohan'ny hampiasana azy.
Raha mila ianao mamono mikraoba, andrahoinao ny rano mandritra ny 1-3 minitra. Araraka ao anaty siny madio avy eo ary apetraka ao anaty vata fampangatsiahana.
Ny rano paompy be kôlômbra dia mety mahatsapa tsy mahafinaritra. Mba hahatonga azy io ho tsara kokoa, dia tsotra toy ny fenoy siny na fitoeran-javatra hafa ary ampidiro anaty vata fampangatsiahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Osmosis mifanohitra
Jereo ny tombony omen'ny sesame anao